Zvinyorwa Zvekushandisa uye Quotation
Chinyorwa chehombodo turntable
Nemaoko isa bhodhoro mubhodhoro risina chinhu
Bhodhoro mubati mukati chaimo uye kuruboshwe kunze
GF16 / 5 Rotary Piston Kuzadza uye Capping Machine
16-musoro pisitoni yekuzadza muchina; 5-musoro capping oparesheni.
Cylinder yakaturika mhando, cam drive, yepasi rese silinda vharafu yakasanganiswa chimiro
Chaizvoizvo simudza mabhodhoro emabhodhoro kune cap sorter
Yakagadzirwa ne304 simbi isina simbi uye yakapfava rabha
Otomatiki muvharo sorter
Rongedza zvega chivharo
Iyi capping chishandiso yakagadzirirwa zvakagadzirirwa-yakasarudzika-akaumbwa mabhodhoro makapu eshampoo kirimu. Zvimwe zvigadzirwa zvekutora hazvigone kuitika.
Bhandi yekuvhara track
Otomatiki chivharo chekudyisa muchina
Kuendesa bhodhoro mubati
Bottle clamping uye demoulding muchina
Electrical kudzora system
1. Nemaoko pfeka pane bhodhoro rinobata turntable.
Muchina uyu uri nyore kuisa bhodhoro risina chinhu muhombodo isina chinhu nemaoko, uye pedzisa bhuku rekutakudza bhodhoro.
Unyanzvi: 25,000 mabhodhoro / awa
Turntable dhayamita: 1000mm
Zviyero: 1000X1000X9500 (mm)
Iri bhandi rekutakura rakagadzirwa neSUS304 zvinhu kune ese mabhodhi anotakura, ayo anonyatso kusangana nezvinodiwa zvehutsanana. Iyo yekuendesa cheni ndiro yakagadzirwa neinjiniya epurasitiki, inowanzozivikanwa seplastiki simbi, inova inopfeka isingagadzirise pasina kukuvadza bhodhoro.
3. 16/5 Rotary pisitoni yekuzadza uye capping muchina
Uyu muchina-wese-mumwe wakakumikidzwa kuzadza nekutora kwepamusoro-viscosity zvinhu seshampoo, shambuu, mafuta ekuzora, conditioner, huchi, sauces, nezvimwe, nekuti izvo zvinhu zvine hunyoro fluidity, inofanira kuwedzerwa Mushini inogona kuzadzwa chete nekumanikidza, saka muchina uyu unoshandisa iyo pisitoni yekuzadza nzira uye iyo rotary inverted yakaturikwa humburumbira mhando, iyo inogona kuzadzisa zvizere izvo zvekuzadza zvido zveakakwira-viscosity zvinhu zvine yakakwira viscosity. Kuti uderedze kusvibiswa kwechipiri, muchina unoshandisa chivharo chekuzadza- Yakagadzirisa zvakanyanya kugadzirwa kwehunyanzvi, inosangana nezvinodiwa zvekudya nemakemikari ezuva nezuva GMP, uye iri nyore kwazvo mukuchengetedza nekuchenesa kunotevera. Muchina uyu pisitoni humburumbira uye vharafu inotora yakakwira silinda uye vharuvhu yakasanganiswa mamiriro, ayo asingori chete anokunda hupenyu hupfupi hwebasa revhavha nekugadzirisa Uye kuoma kwekumisikidza, kudhura kwekugadzirisa mutengo, chisimbiso chakasimba, kuchenesa kwakashata uye zvimwe zvikanganiso, asi zvakare kunatsiridza zvakanyanya kuzadza kunyatso uye nyore kwekuchenesa; humburumbira yemuchina uye vharuvhu yemuchina parizvino iri yepasi rese Yakashongedzerwa neyakawedzera mhinduro uye yakakura kona kona. ndiyo yakakodzera michina yekugadzira yezvakawanda mabhizinesi ekugadzira.
Huru technical parameter
Simba: AC 220V; 50HZ
Simba remuchina: 3KW
Kuzadza misoro: 16
Nhamba yemusoro wekutora: 5
Yakashongedzerwa nemhepo sosi: 0.65Mpa
Zvinoshanda mugaba magadzirirwo:
Kureba: 80mm ~ 280mm
Zvinoshanda kavha magadzirirwo.
Kureba: 10mm ~ 35mm
Dhayamita: Φ20mm ~ Φ80mm
Kubuditsa: 2500P / h
Hukuru hwese: 2300x2150x2300mm
4. Otomatiki chivharo kusunungura muchina
Iyi capping muchina yakanyatsogadzirirwa kukwikwidza kwemabhodhoro akasarudzika-akaumbwa neakakosha maumbirwo emakambani ezuva nezuva emakemikari. Muchina uyu wakanyanya kuomarara kupfuura akajairika macapping michina. Uchishandisa chimiro chekaputi, akati wandei anoenderana echiteshi mahwendefa akagadzirwa. Iyo yekunze pani inotenderera panguva imwe chete, uye inosundira muvharo muye inoenderana muvharo concave muforoma pabasa chiteshi. Chekupedzisira, muvharo unoswededzwa kumusoro mumwe neumwe nebutiro rinowirirana bhandi, ndokusundidzirwa mukepi yekudyisa track, uye bhodhoro rinotumirwa mumuchina wekucheka uchidya tireyi uye kupedzisa basa.
5. Bottle clamping uye demoulding muchina
Muchina uyu unogadzirirwa mutsetse wekugadzira wemabhodhoro akaumbwa nevane mabhodhoro. Mabhodhoro akazadzwa uye akavharirwa anotorwa kunze kwevane mabhodhoro. Mabhodhoro acho anotanga kumanikidzwa, iwo ekuisira mabhodhoro anobva adonha nekuda kwesimba, uye ndokuzodzokera kune vane mabhodhoro.
Divi: 1600 * 850 * 1100
6. Chakagadzirwa kavha papuratifomu
Iyi chikuva chakagadzirwa nesimbi isina tsvina uye inosangana nezvinodiwa zveGMP.
7. Bhodhoro rinobata
Mubati webhodhoro une mabasa maviri. Imwe ndeyekubatsira mabhodhoro asina kuumbwa zvisina kuenzana ayo ari nyore kudurura mabhodhoro pabhandi rekutakura. Chechipiri kubatanidza mabhodhoro ezvinotsanangurwa zvakasiyana uye zvakasiyana, zvichibvumira mabhodhoro kuti apinde pane chinobata bhodhoro. Mushini wekuzadza uye wekutapa une urefu hwakafanana, uye inoenderana bhodhoro rekudyisa tireyi yakabatana. Kunyangwe iri gwara rekudyisa bhodhoro, tray yekudyisa bhodhoro, kukwirira kwemuchina wekuzadza, kana kukwirira kwemuchina wekutora, hapana chikonzero chekugadzirisa. Kwete kwete chete inoderedza kuwanda kwebasa revashandi kana vachitsiva iyo bhodhoro, uye inovandudza kugadzirwa kwehunyanzvi, asi zvakare muchina mumwe wakawanda-chinangwa, uye akawanda maratidziro anogona kushandiswa, izvo zvinoderedza zvakanyanya mutengo wekutenga wemidziyo yekugadzira emabhizinesi.
Pashure: Semi-otomatiki chubhu yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina
Zvadaro: Tube Yemukati Kuchenesa Kuzadza uye Kuisa Mushini Machine
yekuzadza uye yekukanda tambo
Semi-otomatiki chubhu yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina